Fisorohana tondra-drano :: Harodana ireo fanorenana ambony tatatra eto an-drenivohitra • AoRaha
Fisorohana tondra-drano Harodana ireo fanorenana ambony tatatra eto an-drenivohitra
Handraisan’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) fepetra hentitra ireo fanorenana maro eny ambony tatatra, noho izy ireo manakana fivoahan’ny rano ka miteraka tondra-drano isaky ny fotoam-pahavaratra. Omena fe-potoana amin’ny fandravana an’ireo fanorenana ireo ny tompon’ny fotodrafitrasa, mialoha ny handraisan’ ny kaominina an-tanana ny fanatanterahana an’izany. Mandeha kosa ny fanadiovana an’ireo lakandrano amin’ny fokontany maromaro eto andrenivohitra, amin’izao fotoana izao.
« Sady manadio izahay no manentana ny olona, toy izay natao teny Besarety, Ambodivona, Avaradoha, Ankorondrano Andranomahery, Ankorondrano. Nisy fanorenana tsy ara-dalàna roa ambin’ny folo, ohatra, hita manodidina an’i Besarety. Ny valo tamin’ireo no nanaiky hanala ny fotodrafitrasa, tahaka ny tamboho, toeram-pivarotana ary misy ampahany amin’ny tranony mihitsy », araka ny fanazavan-dRasamoelimihamina Niry, talen’ny fanajariana ny tanàn-dehibe eto Antananarivo.
Fe-potoana dimy ambin’ny folo andro hatramin’ ny iray volana no omena an’ireo olona voakasiky ny fanorenana tsy ara-dalàna. Tsy maintsy ho tonga amin’ ny fandrodanana ny tsy fandraisan’ireo tompontoerana ny fepetra nampahafantarana azy, aorian’io fe-potoana io.
Niavosa ihany koa ny fako noesorina mandritra ny fanadiovana an’ireo lakandrano. Nantsoina avokoa ny tompon’andraikitra rehetra teo anivon’ny fokontany sy ireo olona misehatra ao anatin’ny asa fanadiovana sy fidiovana (RF2).
Antso fahalinana momba ny fitaterana :: Nahazoana dosie telo ny zotra Tsarasaotra-Ivato